တန်နဆီး - ဝီကီပီးဒီးယား
လီဗာမိုရီယမ် ← တန်နဆီး → အိုဂန်နက်ဆွန်
အတည်ငြိမ်ဆုံး တန်နဆီး၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 22 ms α 11.11, 11.00, 10.91 289Mc
syn 51 ms α 10.81 290Mc
တန်နဆီး (Tennesine) ဒြပ်စင်သည် ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား၌ ယာယီအမည် အန်နမ်ဆက်တီယမ် (Ununseptium) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ယာယီသင်္ကေတမှာ Uus ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၁၇ ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်ကို ရှရှားနိုင်ငံ Dubna မြို့ JINR ကောလိပ်ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Ununseptium အမည်သည် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောဒြပ်စင်အမှတ် ၁၁၇ အတွက် သိပ္ပံဆိုင်ရာအမှတ်အသားအဖြစ် Latinate ဘာသာအရ “one-one-seven-ium” (“ium” beingastandard ending for element names)ဟုခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Ununoctium သည် transuranic (transuranic elements=ransuranium element, chemical element with an atomic number greater than 92 (which is the atomic number of uranium)) ဒြပ်စင်များကဲ့သို့ဓာတ်ခွဲခန်းမှသာ ထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့်ဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိသိပ္ပံဘာသာရပ်တွင် Ununseptium အမည်ဖြစ်အတည်ပြုထားဆဲ ဖြစ်သည်။
၎င်းဒြပ်စင်ကို မြေကြီးပေါ်တွင်သဘာဝအတိုင်းလုံဝ မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။
၎င်းဒြပ်စင်သည်အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်၎င်းဒြပ်စင်မှလူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
၎င်းဒြပ်စင်သည် အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့် ပတ်ဝန်ကျင်သို့ ၎င်းဒြပ်စင်၏သက်ရောက်မှုများကို လေ့လာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
↑ Royal Society of Chemistry (2016)။ Tennessine။ Royal Society of Chemistry။ “A highly radioactive metal, of which onlyafew atoms have ever been made.”
↑ GSI (14 December 2015)။ Research Program – Highlights။ GSI။ “If this trend were followed, element 117 would likely bearather volatile metal. Fully relativistic calculations agree with this expectation, however, they are in need of experimental confirmation.”
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Haire
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements" (1981). Journal of Physical Chemistry 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021.
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ "Ionization Potentials, Electron Affinities, Resonance Excitation Energies, Oscillator Strengths, And Ionic Radii of Element Uus (Z = 117) and Astatine" (2010). J. Phys. Chem. A 2010 (114): 13388–94. doi:10.1021/jp107411s. Bibcode: 2010JPCA..11413388C.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တန်နဆီး&oldid=722982" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။